Abuja : Shir dhaxmaray taliyayaasha ciidamada qaarada Africa iyo Mareykanka
​Magaaladda Abuja ee dalka Nigeria, ayaa waxaa ku soo dhamaaday shirweyne socday muddo Saddex maalin ah, kaasi oo u dhaxeeyey taliyayaasha ciidamada difaaca Qaaradda Africa iyo dowladda Mareykanka.
Shirkasi Soomaaliya waxaa uga qeyb galay Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Gaas C/wali Jaamac Gorod iyo wafdi uu hoggaaminayo.
Shirka, ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxeysa Taliyayaasha iyo siddii ay isku dhaafsan lahaayeen qibradaha, tababarada dhanka ciidanka iyo arrimo kale.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka, Sarreeye Gaas C/wali Jaamac Gorod, ayaa intii uu ku sugnaa Magaaladda Abuja ee dalka Nigeria, kulmo gooni gooni ah waxaa uu la yeeshay Madax ay ka mid yihiin Kaaliye ku xigeenka xog-hayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee u qaabilsan Africa Ambassador Stephanie S. Sullivan iyo taliye ku-xiggeenka taliska Mareykanka ee Africom.
Madaxda labada dhinac, ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen Taageeridda ciidamada xoogga dalka, kordhinta dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, siddii looga caawin lahaa dowladda Soomaaliya dib u dhiska ciidamada xoogga dalka iyo wanaajinta xiriirka millatari ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
​ Ciidamada Booliiska Somaliland ayaa goor dhaw oo maanta ah xabsiga u taxaabay Boqor Cismaan Buur-Madoow oo deegaanka Carmo ee dowlad gobolleedka Puntland uga qeybgalay caleemo saarka mid ka mid ah Salaadiinta Soomaaliyeed.
Boqor Buur-madoow ayaa lagu eedeeyay in uu munaasabada caleemo saarka ka dhacay deegaanka Carmo ka jeediyay hadalo ka hor imanaya qaddiyada iyo jiritaanka Somaliland.
Feysal Xiis Cilmi oo ah afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay xariga Boqor Buur-madoow.
‘’Waxaa loo xiray Boqor Buur-Madoow in jeedinta hadalo lid ku ah jirintaanka Somaliland iyo faafinta warar been ah oo aan sal iyo raad toona laheyn;’’ ayuu yiri afhayeenka ciidamada Booliiska.
Toddobaadkii hore ayay maxkamad ku taal magaalada Hargeysa waxa ay ku xukuntay saddex sano oo xarig ah Abwaanad Naciima Qorane kadib markii lagu eedeeyay inay fidineysay hadalo lid ku ah maamulka Somaliland.
​Shirkii Caadiga ahaa ee Gollaha Wasiiradda oo uu shir-guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta looga hadlay Hubinta Tirakoobka Shaqaalaha Rayidka ah ee Dawladda, Xaaladda kala guur ee ciidamada AMISOM. Sidoo kalena waxaa lagu ansixiyay Tubta Arrimaha Bulashada iyo xeer Mamnuucya jarista dhirta iyo dhoofinta Dhuxusha, iyada oo warbxino kala duwan laga dhagaystay qaar ka mid ah Wasiiradda.
Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa ka warbxiyay barnaamij lagu tiro koobaya shaqaalaha Rayidka ah ee dawladda, kaas oo fududayn doona la socodka iyo horumarinta xirfadeed ee shaqaalaha.
Waxuuna Wasiirku tilmaamay in tirokoobka laga bilaabayo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ka dibna loo gudbayo dhammaan Wasaaraddaha iyo hay’addaha kale ee dawladda.
Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Masar oo khadka Telleefoonka ku wada hadlay
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay khadka tellefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Masar Cabdulfataax Al Sisi ayaa uga mahad-celiyay taageerada joogtada ah ee ay dowladda Masar la garab taagantahay shacabka Soomaaliyeed.
Dalka Iskutaga Imaratka Carabta oo Somalida kuyiri Kabaxa Dalka Safaaradana Somaliya shaqada kajoojay
Khilaafka siyaasadeed ee dhax taagan dalka Somalia iyo Imaradka carabta oo waji kale yeeshay ayaa waxaa soo kordhay maanta in lajoojiyay wax ciqaamad ah in lacusbeysiiyo ama lasameeyo soomalida kunool dalkaa oo loo ogalaaday qora ineey kansalaan ama kuwa bixida goosanaya hadaba taasi waxeey keeneysaa dadka kudhaqan ineyna awoodin in eey cusbonisiiyaan ciqamadooda ama eey shaqadooda siiwataan ama iskuulka caruurta ugusii jirto.
hadii eey ciqaamada kaa dhacdo waa inaad dalka iskaga baxdaa .
waxaa nasoo gaadhaya xataa in safaarada somaliya layidhi joojiya shaqada
hadaba waxaa dhibaato sogaadhaya dad ganacsato,shaqaale, ardeey
dadkaas oo ah ineey katashtaan dalkan imaraatka inta ciqaamada kadhicin.
wixii akhbaar ah waan idinlasoo socodsiin doonaa inshaa allah
Khuburo dhanka kiimikooyinka ah ayaa loo ogolaan doonaa in ay booqdaan goobtii la sheegay in uu weerarka kiimikada ah ka dhacay Arbacadii, sida ay dawladda Ruushku sheegtay.
Koox caalami ah ayaa Suuriya ku sugnayd tan iyo Sabtidii, balse looma ogolaanin in ay booqdaan Douma.
Weerarkii 7 Abriil dhacay ayaa horseeday weerar dhanka cirka ah oo dawladdaha Brirain, Maraykanka iyo Faransiisku ay ku qaadeen xarumo ay dawladda Suuriya leedahay.
Talaadadii hore warbaahinta dawladda Suuriya ayaa sheegtay in waaxda difaaca dalkaasi ay ka jawaabtay gantaallo lagu soo weeraray magaalada galbeedka ku taalla ee Xomas.
Gantaalladaas ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidammada cirka ee Shayrat sida ay warbaahinta dawladdu sheegtay, balse faah-faahin kama aysan bixinin cidda soo gantay.
​Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in lacagtii todobaadkii hore dowlada Soomaaliya ay ku qabatay garoonka diyaaradaha Muqdisho qeyb ka mid ah Imaaraadku ugu talagaleen ciidamada ku sugan deegaannada Puntland oo ay tababaraan.
Waddooyinka magaalada Muqdisho waxaa xilliyada roobka da’a fariista biyo aad u badan, kuwaasi oo saameyn ku yeesha isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Biyaha fariista Laamiyadan ayaa waxaa ka dhashay cudurro, iyadoo aanay jirin is xilqaan muuqda oo ku aadan in Booyado looga saaro laamiyada biyahan fariistay.
Sidoo kale, waxaa uu burbur soo gaaray waddooyin muhiim u ahaa dadweynaha magaalada Muqdisho, iyadoo meelaha qaar ay ka qodmeen bohollo.
Dadka ayaa arrimahan oo dhan u aaneynaya in markii waddooyinka Muqdisho la dhisayey aan loo sameyn biyo mareenno iyo sidoo kale meello ay biyaha isugu tagaan, kadibna laga qaado.
Muqdisho waa caasimadda dalka, waxayna weli u muuqataa mid aan helin adeegyadii bulshada ee loo baahnaa, in kastoo dib usoo kabasho ay jirto.
Barakacyaasha ku nool xeryaha magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in dib loogu celiyo deegaannadoodii si ay u fashaan dalagga beeraha maadaama uu bilowday roobkii guga.
Barakacyaasha ayaa sheeagaya in hadda ay doonayaan in ay dib u fashaan beerahooda oo awal ay uga soo baro kaceen abaaro jiray awgeed.
Qaar ka mid ah dadkan barakacyaasha ah oo la hadlay Goobjoog News ayaa yir.
“Waxaan ahaa beeraley waxaan doonayaa in aan dib ugu laabto deegaankeygii si aan u fasho beeraha “.
Qof kale oo ka mid ah barakacyaasha oo isna la hadlay Goobjoog News ayaa yiri “Hadda waan rabaa in la ii celiyo gobolkeyga si aan u tacbado beerteyda”.
Dadkan ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in si dhaqso ah loogu celiyo deegaannadoodii si ay u tacbadaan dalagga beeraha xilli uu bilowday roobkii guga.
​Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in maxkamada gobolka Maroodijeex xukun saddex sano ah ku riday Abawaannad Naciimo Qarone.
Naciimo ayeey maxkamada ku soo oogtay danbi ah in ay faafisay hadalo ka dhan ah jiritaanka Maamulka Somaliland iyo inay dal shisheeye ka sameysay barnaamij kacdoon lid ku ah Somaliland.
Xariggeeda ayaa waxaa horay u cambaareeyay hey’adaha xuquuqda aadanaha, iyadoo lagu xusuusto suugaan ay ka tirisay midnimada Soomaaliya.
Abwaannad Naciima ayaa horay uga qeyb gashay barnaamijyo kala duwan oo isugu jiray bandhigyada buugaagta iyo suugaanta oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Maxkamaddu ma sheegin in Xukunka Naciima la iibsan karo ama racfaan laga qaadan karo sida xukunno ay horay u ridday oo kale.